Tag: Amisom | Sagal Radio Services
Faah Faahin: Ciidamada AMISOM oo dad rayid ah ku laayay duleedka Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • October 25, 2017
Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa maanta barqadii dad rayid ahaa ku laayey duleedka magaalada Muqdisho, kaddib markii qarax miino lagula eegtay deegaanka Lafoole.
AMISOM oo war ka soo saartay mamnuucidii gaadiidkooda ee Wadada Maka Al-Mukarama
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Joe Kibet ayaa ka hadlay amar ka soo baxay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed, kaasoo ahaa in gaadiidka AMISOM aanay isticmaali karin Wadada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan Isgoysyada Sayidka illaa Banaadir.
AMISOM oo beenisay war ka soo baxay Al-Shabaab oo ahaa in 5 askari Ugandes ay dileen
War ka soo baxay Taliska AMISOM ayaa lagu beeniyay sheegashada Al-Shabaab ee ahaa askar ka tirsan kuwa UGanda ku dileen qarax miino oo jimcihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Afgooye.
AMISOM oo sheegtay iney burburisay goob Al-shabaab qaraxyada ku diyaarin jireen
Sagal Radio Services • News Report • December 10, 2016
War saxaafadeed kasoo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamadooda burburiyeen goob Alshabaab qaraxyada ku diyaarin jireen oo ku taala duleedka magaalada Kismaayo.
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay 5 askari ka tirsan AMISOM
Ciidamada Ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay Shan Askari oo ka tirsan ciidanka AMISOM iyo 10-qof oo Soomaali ah, kuwaasoo iibinayay qalabka loo keeno ciidanka AMISOM.
AMISOM: Saraakiil Al-shabaab ah ayaan ku dilnay Hawl-gallo ka dhacay Gobolka Shabeellada Hoose
Sagal Radio Services • News Report • April 5, 2016
Taliska AMISOM, ayaa ku sheegay War-bixin ay soo saareen maanta inay lix sarkaal oo ka tirsan Al-shabaab ku dileen hawl-galo ay dhawr-kii casho ee lasoo dhaafay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose.
Dowlada Kenya oo ciidamo xoojin ah soo gelisay gudaha dalka Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • January 25, 2016
Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo lixaad leh oo ah ciidamada Milatariga Kenya ay gudaha u soo galeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyagoo ka soo gudbay xadka labada dal.
AMISOM “Waxaan dilnay 98 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab”
Taliyaha qeybta afaraad ee Ciidamada AMISOM Col. C/raxmaan Dhimbis ayaa sheegay in howl galada ay ka wadeen Gobolka Hiiraan ay ku dileen illaa 98 ka tirsan dagaalyahanada Shabaab.
Dowladda Federaalka oo loogu baaqay inay wax ka qabato Tacadiyada AMISOM.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay si deg deg ah wax uga qabato tacadiyada ay Ciidamada AMISOM ka geysanayaan magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
AMISOM oo loogu baaqay inay fara geliso xiisada ka taagan Guriceel
War murtiyeed laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta Beelaha Gobolada Dhexe ee ka socda Dhuusa Mareeb ayaa looga codsaday in Ciidamo ka socda AMISOM la geeyo Guriceel, si loo joojiyo dagaalka.
AMISOM oo sheegtay inay Howlgal Qarsoodi ah ka Fulisay Gobolka Galguduud
Sagal Radio Services • News Report • September 29, 2014
Ku-simaha ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa AMISOM, Lydia Wanyoto ayaa ciidmada AMISOM ee ku sugan gobolka Galguduud ku ammaanay howlgal ay si qarsoodi ah uga furliyaan gobolkaas, kaasoo ay ku weerareen dagaalyahanno Al-shabaab ka tirsan oo jaray jidka isku xira degmooyinka Dhuuso-mareeb iyo Ceelbuur oo kawada tirsan gobolka Galguduud.
AMISOM oo sheegtay inay burburisay Xeryo ay Al-shabaab ku lahayd Jubbooyinka
Sagal Radio Services • News Report • September 13, 2014
AMISOM ayaa sheegtay inay weerartay saldhigyo ay Al-shabaab ku lahayd degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose iyo deegaanka Birta-dheer ee duleedka Kismaayo.
Jan Eliasson oo Golaha Ammaanka ugu baaqay in tirada ciidanka AMISOM la kordhiyo, lana taageero Ciidamada Soomaaliya
Ku xigeenka xoghayaha guud ee QM, Jan Eliasson oo xalay ka hadlay kulan ay lahaayeen golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay loogana hadlayay kordhinta ciidamada AMISOM iyo taageerada ciidamada Soomaaliya ayaa ku baaqay in tirada AMISOM si dhaqso ah loo kordhiyo.
Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada dowladda, AMISOM iyo Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka Ceelasha Biyaha
Sagal Radio Services • News Report • October 14, 2013
Dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda kuwa AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay deegaanka Arbacow ee ku yaala duleedka deegaanka Ceelasha Biyaha.
Dowadda iyo AMISOM oo ka arrinsaday wax ka badalka sharciyadda AMISOM
Sagal Radio Services • News Report • January 9, 2013
Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, ayaa ka dooday dib u eegis lagu sameynaayo howl galka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ay Soomaaliya ka wadaan.